Steam waa qeybinta fiidiyowga ciyaarta fiidiyowga dijitaalka ah ee uu sameeyo Valve. Waxaa loo bilaabay sidii macmiil kombiyuutar wadata oo joogsan Sebtember 2003 hab loogu talagalay Valve inuu ku bixiyo casriyeyn otomaatig ah cayaarahooda, oo la ballaariyay si loogu daro ciyaaraha ka soo baxa daabacayaasha xisbiga saddexaad. Steam ayaa sidoo kale ku fiday websaydh ku saleysan internetka iyo moobiilka wareega hore ee dijitaalka ah. Steam wuxuu bixiyaa maareynta xuquuqaha dhijitaalka ah (DRM), martigeliyaha serverka, wareejinta fiidiyowga, iyo adeegyada xiriirka bulshada. Waxa kale oo ay siisaa isticmaalaha rakibida iyo cusbooneysiinta tooska ah ee cayaaraha, iyo astaamaha bulshada sida liistada asxaabta iyo kooxaha, kaydinta daruuraha, iyo codka ciyaarta iyo wada hadalka.
Softiweerka wuxuu soosaaraa barnaamij barnaamij barnaamijyo bilaash ah oo la heli karo (API) oo loo yaqaan Steamworks, kaas oo horumariyayaashu u isticmaali karaan inay dhexgalaan waxqabadyo badan oo Steam ah agabyadooda, oo ay ku jiraan guulaha ciyaarta, microtransaction, iyo taageerada loogu talagalay waxyaabaha isticmaalaha loo abuuray iyada oo loo adeegsanayo Aqoon-isweydaarsiga Steam. In kasta oo markii hore loogu talagalay in lagu adeegsado nidaamyada hawlgalka Microsoft Windows, noocyo loogu talagalay macOS iyo Linux ayaa markii dambe la sii daayay. Barnaamijyada mobilada ayaa sidoo kale loo sii daayay macruufka, Android, iyo Windows Phone sannadihii 2010-kii. Bartilmaameedka ayaa sidoo kale bixiya xulasho yar oo ka kooban waxyaabo kale, oo ay ku jiraan barnaamijyada naqshadeynta, qalabka, qalabka dhawaaqa ciyaarta, anime, iyo filimo.
Nidaamka Steam waa mashiinka ugu weyn ee qaybinta dhijitaalka ah ee ciyaaraha PC, kaasoo haysta ilaa 75% boosaska suuqa ee 2013. Marka la gaaro 2017, adeegsadayaasha iibsanaya cayaaraha Steam waxay u dhigantaa US $ 4.3 bilyan, oo mataleysa ugu yaraan 18% iibka ciyaaraha PC adduunka. Marka la gaaro sannadka 2019, adeeggu wuxuu lahaa in kabadan 34,000 ciyaarood oo ay ka badan yihiin 95 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon bil kasta. Guusha Steam waxay horseed u noqotay horumarinta khad ka mid ah muruqyada 'Steam Machine microconsoles', oo ay ku jiraan nidaamka hawlgalka SteamOS iyo Is-xakamaynta Steam.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Steam&oldid=202839"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 30 Juun 2020, marka ee eheed 10:18.